लुम्बिनीमा मर्न चाहन्थे ओम: यी ३ कुरामा थियो गुनासो « Sajha Page
लुम्बिनीमा मर्न चाहन्थे ओम: यी ३ कुरामा थियो गुनासो
वरिष्ठ भारतिय अभिनेता ओम पुरीको असामयिक निधनलाई प्रहरीले अझै पनि शंकाको घेरामा राखेको छ। ओमकी जनसम्पर्क अधिकारी स्मिता सिंहका अनुसार ओम आफ्नो जीवनको अन्तिम सास नेपालमा रहेको गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमा फेर्न चाहन्थे। उनी आफ्नो नकारात्मक छविलाई लिएर दुखित थिए। स्मिताका अनुसार उनी अर्का भारतिय कलाकार नस्रूध्दिन शाहसँग पनि दुखित थिए।
एक साता अघि स्मिताका अनुसार ओमले ‘म अज्ञातबासका लागि बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जान चाहन्छु। म १५ दिनका लागि त्यहाँ जानेछु र कुनै एउटा गाउँमा मैनबत्ती र टर्चलाइटको साहारामा समय बिताउनेछु। म गौतम बुद्ध बसेको रूखको नजिक बस्नेछु। म मेरो शरिर त्यही त्याग गर्नेछु’, भनेका थिए।
त्यस्तै उनले राजनीतिमा जान चाहेको इच्छासमेत आफूसँग राखेको स्मिताको भनाइ रहेको छ। उनले सो पार्टीको नाम ‘इन्सानियत’ (नवता) राख्ने निर्णय गरेका थिए भने ट्राफिकका कारण कसैको निधन नहुने स्थिति बनाउने पनि उनको चाहना थियो। ओमले आफ्नो निधनमा भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिले शोक व्यक्त गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको बताउने गरेका थिए।
उनको निधनमा मोदीले ट्विट गर्दै संवेदना प्रकट गरेका थिए।
यी ३ कुरामा दु:खी थिए ओम
१. स्मिताका अनुसार नसरूद्धिन शाहले उनलाई चिन्न सकेनन्। ओम उनलाई आफ्ना पुराना मित्र मान्द्थे। ओमका अनुसार आफ्नो निधनपछि मात्र मानिस तथा मिडियाले उनको महत्वलाई बुझ्ने र आफ्ना बारेमा खोजी गर्नेमा उनी विश्वस्त थिए।
२. उनी एक दिन सबै मिडियासँग साक्षात्कार गरेर आफ्नो बारेमा स्पष्ट पार्न चाहन्थे। उनी मिडियासँग आफूलाई गलत छविका साथ प्रस्तुत गर्ने कारणका बारेमा जान्न चाहन्थे। उनलाई सेनाको जवानका बारेमा दिएको बयानले दुखी तुल्याएको थियो। उनले पछि १० लाख रूपयाँको चेक दिदैं माफी मागेका थिए। यसबारेमा कसैले केही नबोलेकामा उनी दुखित थिए।
३. उनले स्मितालाई यस्तो पनि भनेका थिए, ‘तिमीलाई थाहा छ मेरो मलाई सबैभन्दा मनपर्ने फिल्म ‘देव’ हो। त्यसमा मैले धेरै राम्रो काम गरेको छु तर त्यसको पहिले प्रशंसा भएन्। मेरो राम्रो कुराको बारेमा कसैले कहिल्ये केही बोलेनन्।